Namoaka ny kinova fijerena faharoa an'ny Tizen OS 5.5 | Avy amin'ny Linux
Navoaka ny Tizen OS 5.5
Navoaka ny kinova fanandramana faharoa an'ny sehatra finday Tizen 5.5, kinova izay kendrena hampahafantarana ireo mpamorona ireo endrika vaovao amin'ny sehatra. Tizen OS dia tetikasa novolavolaina teo ambany fiahian'ny Linux Foundation, farany teo niaraka tamin'i Samsung. Tizen dia miorina amin'ny sehatra Linux an'ny Samsung (Samsung Linux Platform - SLP), fampiharana iray namboarina tao amin'ny LiMo.
Ny tetikasa dia am-boalohany noforonina ho toy ny sehatra HTML5 ho an'ny finday hahomby amin'ny MeeGo. Samsung dia nanambatra ny ezak'izy ireo niasa tamin'ny alàlan'ny Linux, Bada, tao amin'ny Tize, ary nanomboka nampiasa azy io tamin'ny sehatra toy ny fitaovana finday sy fahitalavitra marani-tsaina.
Ny kaody dia nahazo alalana tamin'ny GPLv2, Apache 2.0, ary BSD. Raha ny Tizen OS builds dia namboarina ho an'ny Raspberry Pi 3, ODROID U3, ODROID x U3, Artik 710/530/533 ary ireo sehatra finday maro samihafa miorina amin'ny arm64 sy maritrano armv7l.
1 Inona no vaovao amin'ity topi-maso faharoa an'ny Tizen 5.5 ity?
2 Sintomy ny Tizen 5.5
Inona no vaovao amin'ity topi-maso faharoa an'ny Tizen 5.5 ity?
Miaraka amin'ny famoahana an'ity topi-maso faharoa ity dia nampiana API laharana avo lenta sary, mamantatra zavatra amin'ny sary ary fantaro ny tarehy mampiasa ny fomba fianarana milina mifototra amin'ny tambajotra neural.
Hanodinana modely, Fonosana TensorFlow Lite no ampiasaina. Ny modely Caffe sy TensorFlow dia mifanaraka.
ihany koa misongadina ny fanampiana ny motera tranonkala nozaraina Castanets (Moteur web misy fitaovana marobe) miorina amin'ny Chromium, izay mamela ny fizarana ny fanodinana votoaty tranonkala amin'ny fitaovana maro. Anisan'izany ny Chromium-efl nohavaozina ho an'ny andiany 69.
Ny iray amin'ireo fanovana misongadina ao amin'ny doka dia ny nampiharina ny fahafaha-mampiditra effets manokana ho an'ny sarimiaina amin'ny fanokafana windows rehefa mandefa fampiharana. Niampy vokany vonona hamelombelona ny fifanakalozana eo anelanelan'ny windows.
Ary koa izany nanampy fanohanana ny protokol DPMS (Asehoy ny famantarana ny fitantanana herinaratra) hametrahana ny efijery amin'ny maody fitehirizana herinaratra.
Raha ny amin'ny fanavaozana ny singa miavaka ohatra ny Wayland kinova 1.17 miaraka amin'ny fanampiana ny libwayland-egl library, Connman dia nohavaozina amin'ny kinova 1.37 miaraka amin'ny fanohanan'ny WPA3, ary wpa_supplicant ho an'ny kinova 2.8, EFL (Enlightenment Foundation Library) dia nohavaozina amin'ny kinova 1.23.
Raha eo amin'ny lafiny fanohanana ianao dia afaka mahita ilay nanampy fanampiana ho an'ny tontolon'ny varavarankely marobe sy fitaovana fampiratiana marobe, fanohanana ny sehatra .NET Core 3.0 ary ny UI API ho an'ny C #.
Amin'ireo fanovana hafa nasongadina tamin'ny fanambaràna ity topi-maso faharoa an'ny Tizen 5.5 ity:
Nisy backend nampiana ao amin'ny subsystem DALi (Toolkit 3D UI) hampiasa ny rendering API an'ny sehatra Android.
Ny Motion API dia nampiana mba hanomezana sary mihetsika vector miorina amin'ny tranomboky Lottie.
Fitsipika D-Bus nohavaozina ary mampihena ny fanjifana fahatsiarovana.
Nanampy andiana plugins GStreamer NNStreamer 1.0.
Nanisy fefy sticker hametahana ny mombamomba ny sticker.
Ny mode fifandraisana haingana amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby (DPP - Wi-Fi Easy Connect) dia nampiana.
Nampidirina ny sehatry ny Battery-Monitor hanarahana ny fanjifana loharanom-pahalalana ary hamakafaka ny fiantraikany amin'ny fihinanana herinaratra.
Ny mpizara fampisehoana fahazavana dia manampy fanampiana malefaka.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Sintomy ny Tizen 5.5
Ho an'ireo liana te-hanandrana ity kinova fanombanana faharoa an'ny Tizen 5.5 ity dia afaka misintona ireo sary efa voaangona ho an'ireo fitaovana samihafa avy amin'ny tranokala ofisialin'ny tetikasa izy ireo.
Ao amin'ny fizarana fampidinana anao dia afaka mahita ireo rohy ianao. Toy izany koa, raha tianao dia afaka mandeha mivantana ianao ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Navoaka ny Tizen OS 5.5
Fedora 31 Fametrahana torolàlana ho an'ny Newbies